प्रवासमा सहयोग जुटाउँदै नेपाली - Karobar National Economic Daily
प्रवासमा सहयोग जुटाउँदै नेपाली
query_builderAugust 16, 2017 11:46 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility196
काठमाडौं : सयभन्दा बढीको मृत्यु र हजारौं परिवार घरवारविहीन हुनेगरी देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी र पहिरोका पीडितलाई राहत प्रदान गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लगायत विदेशमा रहेका नेपालीले सहयोग संकलन अभियान तीव्र बनाएका छन् ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरू तथा विभिन्न संस्थाको सहयोगमा एनआरएनएले बाढी तथा पहिरो पीडितका लागि आपतकालीन राहत कोषको स्थापना गरेको छ । एनआरएनएको कोषमा अध्यक्ष शेष घले र जमुना घलेले एक करोड रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेका छन् । एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) को आइतबार बसेको आकस्मिक बैठकले आपतकालीन राहत प्रदानका लागि कोष स्थापना गर्ने र तत्कालै राहत वितरणमा खटिने निर्णय गरेको छ ।
“यो दुःखको घडीमा हामी देशवासीको साथमा छौं,” अध्यक्ष घलेले भने, “बैठकबाट हामीले एक करोड बढी रकम संकलन गरिसकेका छौं, आवश्यक राहत सामग्री खरिद गरी हामी तत्कालै वितरणमा खटिने छौं ।” संघका अध्यक्ष घले र उनकी पत्नी जमुना गुरुङको एमआईटी फाउण्डेसनले बाढी पीडितका लागि १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हो ।
साथै एनआरएनका संरक्षक जीवा लामिछाने, उपाध्यक्षहरू भवन भट्ट र कुमार पन्तले एक–एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । संघका अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरूले पनि सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
बाढीपहिरो पीडितलाई के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भनी संघका अध्यक्ष घलेले आइतबार नै गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासँग टेलिफोनमा छलफल गरेका थिए । सहयोगको आवश्यकताबारे गृह मन्त्रालयले विस्तृतमा जानकारी दिएपछि सोही आधारमा राहत सामग्री उपलब्ध गराउने संघले निर्णय गरेको छ ।
तत्कालका लागि राहत कोषको रकम दुई करोड रुपैयाँ पु-याउने र सामग्री खरिद प्रकृया सुरु गर्ने जनाइएको छ । राहत वितरणको समन्वय गर्न संघका अध्यक्ष घले तत्कालै अष्ट्रेलियाबाट नेपाल आउने बताइएको छ ।
संघले विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई आफ्नो क्षमता अनुसार रकम सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ । साथै संस्थाको मातहतका सबै देशका एनसीसीहरूलाई पनि रकम संकलनमा तीव्रताका साथ लाग्न र संकलित रकम एक साताभित्र एनआरएन केन्द्रीय कार्यालयको खातामा पठाइसक्न संघले विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेको छ ।
मुलुकलाई विपत परेका बेला गैरआवासीय नेपाली संघले सक्रियताका साथ मानवीय सहयोग गर्ने गरेको छ । ०७२ सालमा आएको महाभूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण सिर्जित मानवीय संकटका बेला पनि गैरआवासीय नेपाली संघले राहत वितरण गरेको थियो । यसरी नै भूकम्पबाट घरवार विहिन भएका लाप्राकबासीका एनआरएनएको पहलमा नमुना एकीकृत बस्तीको निर्माण कार्य ५० प्रतिशत पुरा भइसकेको छ ।
एनआरएनए बेल्जियमको सहयोग
गैरआवासीय नेपाली संघ बेल्जियमले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । एनआरएनए बेल्जियमले हालै सम्पन्न अधिवेशनमार्फत राहत संकलन कार्यक्रम औपचारिक रुपमा घोषणा गरेको थियो ।
राहत अभियानमा सहयोग पु¥याउन एनआरएनए बेल्जियमले सम्पूर्ण बेल्जियममा रहेका संघ सस्था तथा नेपाली समुदायमा हार्दिक अनुरोध गरेको छ । एनआरएनए केन्द्रीय परोपकारी कोषमा १९ लाख रुपैयाँ पठाउने एनआरएनए बेल्जियमका अध्यक्ष गंगाधर गौतम बताए ।
एनआरएनए साउदी पनि सहयोग जुटाउँदै
यसैगरी गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् साउदी अरबको १२ औंं आकस्मिक साइबर कन्फ्रेन्स बैठकले बाढी पीडितका लागि सहयोग संकलन गर्ने भएको छ । बैठकले एनसिसि उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार रिजालको संयोजकत्वमा बाढी पीडित राहत अभियान समिति गठन गरेको छ ।
समितिमा अलकासिम क्षेत्रबाट एनसिसि सचिव विशाल कुमार श्रेष्ठ तथा क्षेत्रीय सचिव रम्जानदिन मिया, ताबुक क्षेत्रबाट एनसिसि केन्द्रिय सदस्य बद्रि बिमली, सल्लाहकार भक्त हमाल तथा क्षेत्रिय सचिव मनोज बराल, रियाद क्षेत्रबाट एनसिसि केन्द्रिय सदस्य नारायण भट्टराइ, क्षेत्रिय अध्यक्ष सरद शर्मा तथा भूतपूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु पौडेल रहेका छन् ।
समितिले साउदी अरबका विभिन्न स्थानमा अभियान संचालन गरी राहत सहयोगका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्भाह गर्ने जनाएको छ । संकलित सबै रकम एनआरएनएको च्यारिटी बैंक खातामा जम्मा गरिने जनाइएको छ ।
एनआरएनए जर्मन पनि सहयोग अभियानमा
एनआरएनए जर्मनी निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेकै बेला नेपालका तराई भागमा आएको बाढी र पहाडी क्षेत्रमा गएको पहिरोका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ ।
बाढी र पहिरोमा परी देशका विभिन्न मुत्यु, घाइते र घरबार विहिन भएका पीडितका लागि सहयोग अभियान संचालन गर्ने बताएको छ । एनआरएनए जर्मनीका अध्यक्ष नवराज रोस्याराले एनआरएनए केन्द्रिय सचिवालयसँग समन्वयन गरेर आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
अमेरिका–नेपाल मेडिकल फाउण्डेसनको सहयोग
अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउण्डेसन (एएनएमएफ)ले नेपालमा गएको बाढी पीडितको सहयोगार्थ चिकित्सा सहायताको साथै जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सहयोग गर्ने उद्देश्यले कोष वृद्धि सुरु गरेको छ ।
ठूलो धनजनको क्षति हुने गरी नेपालमा बाढीपहिरो गएपछि संस्थाले कार्यकारी समितिको बैठक आह्वान गरेर पीडित परिवारलाई सहायता गर्ने निर्णय गरेको हो । छिटो भन्दा छिटो राहत तथा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले भएको बैठकले ४५ हजार रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ भने एक कार्य दल पनि गठन गरेको संस्थाका उपाध्यक्ष डा. सन्तोष सापकोटाले बताए ।
स्पेनमा पनि सहयोग जुट्दै
यसैगरी गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद स्पेनले बाढी पहिरो पीडितको सहयोगार्थ सहयोग रकम संकलन अभियान सुरु गरेको छ । स्पेनस्थित नेपाली संघ संस्थाहरूको समन्वयमा संघले रकम संकलन अभियान सोमबारदेखि सुरु गरेको हो । संघले पहिलो दिनमा नै करिब १ हजार ५ सय युरो संकलन गर्न सफल भएको छ ।
एनआरएन स्पेनको कार्यालयमा बसेको आकस्मिक बैठकले संघका अध्यक्ष चिन्तामणि सापकोटाको अध्यक्षतामा राहत संकलन समिति गठन गरेको छ । समितिमा स्पेनस्थित राजनीतिक, जातीय, क्षेत्रीय लगायतका संघ संस्थाहरूलाई समेटिएको छ ।
एनआरएनए हङकङको ५ लाख सहयोग
यसरी नै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) हङकङले नेपालका बाढी–पहिरो पीडितका लागि ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (आईसीसी)का सल्लाहकार यमकुमार गुरुङ र एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रीय सहसंयोजक कृष्णप्रसाद पाण्डेलाई सहयोग रकम अध्यक्ष राधिका गुरुङले हस्तान्तरण गरेकी छिन् ।
एनआरएनए आईसीसीको आइतबार सम्पन्न आकस्मिक बैठकले शुक्रबारको अविरल वर्षाका कारण उत्पन्न बाढी पीडितका लागि राहत संकलन गर्न कोषको स्थापना गरी एक हप्ताभित्र दुई करोड संकलन गर्ने र वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्विट्जरल्याण्डमा ३ लाख उठ्यो
बाढी–पहिरो पीडितका लागि स्विट्जरल्याण्डमा सहयोग आह्वान भएकै दिनमा ३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् स्विट्जरल्याण्डको आह्वानमा रकम संकलन भएको हो । रकम संकलन कार्य जारी रहेको संघले जनाएको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषदले २ लाख १० रुपैयाँ र महिला फोरमले ९० हजार रुपैयाँ संकलन गरेपछि रकम जुटेको हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्य डा. विनय श्रेष्ठले ५० हजार रुपैयाँ सहयोग घोषणा गर्दै रकम संकलन आह्वान गरेका थिए । यस्तै प्रितम गुरुङले २५ हजार रुपैयाँ, विष्णु थापाले २५ हजार रुपैयाँ, हिरावल गुरुङले २० हजार रुपैयाँ, कराशलन ड्रेयाले २० हजार रुपैयाँ र भूमि गुरुङले १५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका छन ्।
सहयोग अभियानमा सन्तोष राई, फणिन्द्र पन्त, अर्जुन बस्ताकोटी, प्रमोद भट्टले १०–१० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् भने सुब एलमेर, किरण गुरुङ र जीवन भट्टराईको ५–५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । संघले यथाशीघ्र सहयोग गरी अभियान सफल पार्न सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
एनआरएनए शेष घले राहत बाढीपहिरो पीडित बाढी र पहिरो